एनआरएनएमा देखिएको विवाद र समाधानका उपाय - Bishwo Sandesh - Bishwo Sandesh
६ कार्तिक २०७८, शनिबार २०:१३
रामप्रताप थापा- संरक्षक, गैर आवासीय नेपाली संघ
गैर आवासीय नेपाली संघ स्थापनाको झन्डै दुई दशकको इतीहासमा संस्था अहिलेसम्मकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ । संस्था जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो र स्थापना ताका जुन उत्साह थियो त्यो क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । संस्था स्थापना ताका एकले बोलेको अर्कोले नकाट्ने, कर्के आँखाले कसैले नहेर्न मात्र नभई विदेशमा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच आपसी सद्भाव, एकता असाध्यै बलियो थियो । तर सन् २००९ पछि संस्थामा विस्तारै विवादको विझारोपण हुन थाल्यो । डा. उपेन्द्र महत्तोले तीन कार्यकाल नेतृत्व गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलादेखि निरन्तर रुपमा संस्थामा विवाद हुँदै आएको छ । त्यो बेला सानो विवाद थियो । तर ठूलो विवाद सन् २०१९–२०२१ कार्यकालको लागि भएको निर्वाचन ताका हायात होटलमा देखियो । जुन बेला सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दबाब देखियो । त्यो विकृतिलाई हटाउन वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त जीले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिनिधिको सिस्टममा परिवर्तन गर्दै अनलाईन भोटिङ जस्ता महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रयास गर्नु भयो ।
कोभिड १९ का बाबजुत पनि कुमार जी नेतृत्वले निकै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भयो । कुमार जीले विकृति अन्त्य गर्न र संस्थालाई सुधार ल्याउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको सुधारहरु कतीपयलाई मन परेन । संस्था गैरराजनीतिक र गैरब्यवसायीक हो । शूरुदेखि नै राजनीतिक जुत्ता र झोला बाहिर राखेर आउनुहोला भनेर हामीले भन्यो । तर अघिल्लो चुनावमा राजनीतिक र आर्थिक रुपमा जुन हस्तक्षेप भयो त्यसलाई रोक्नका लागि ल्याइएका परिवर्तनलाई सफल हुन नदिन विभिन्न विवादहरु झिकेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिने कार्य गरियो । त्यो संस्थाको लागि निकै विडम्वनापूर्ण थियो । साथै आफ्नै साथीभाईहरुबाट अनावश्यक रुपमा एनआरएनतर्फबाटै सरकारमाथि दबाब पर्यो । म तिम्रो पार्टीको हो, मैले चुनाव जित्नुपर्छ भनीयो । दलहरुलाई पनि लोभ लाग्यो र संस्थामा चरण रजनीतिकरण हुन थाल्यो । एनआरएनए स्वायत्त र पूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्रलाई गुहार्न जानु अर्को गल्ती भयो । राजनीतिज्ञहरु र सिभिल सर्भीसबीचमा ठूलो अन्तर छ । परराष्ट्रबाट भइरहेको÷ चलिरहेको चुनाव रोक्ने सम्मको पत्र आयो । यस किसिमको पत्रले चुनाव रोकिनु, कार्यकालको समय फरक हुँदै जानु उचीत होइन ।
यो विषयमा नेपाल सरकारले एनआरएनबाट के फाइदा गर्यो ? सकारात्मक के काम गर्यो ? भन्ने विषयमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । जस्तो एनआरएनलाई सरकारबाट ठूलो रुपमा कुनै पनि सहयोग भएको छैन । अहिलेसम्म राहदानीदेखि नागरिकता, वैदेशिक लगानीको सहुलीयतदेखि कुनै पनि सहयोग पाएको छैन । बरु एनआरएनएले नेपाल सरकारलाई ठूलो योगदान र सहयोग गरेको छ । स्वभावैले नै हाम्रो गुणहरु हेरौ अनी अवगुणहरु पनि हेरौ । एउटा कुरा सम्बन्धीत मन्त्रालयले जे माग गरेको छ, त्यसलाई हेरेर गम्भिर रुपमा लिदैं जे जे तोकेको छ त्यसलाई केलाऔ । विश्वभरिका सबै देशमा रहेका अवरोध हटाऔं । त्यसो गरेको खण्डमा एनसिसीहरु झन झन बलियो र परिष्कृत हुन्छन् । त्यो गर्न कुनै अवरोध छ जस्तो लाग्दैन ।
अर्को कुरा, हामी आ-आफ्नै हिसावले अगाडि बढ्छौ भने त्यो बाटो गलत छ । मन्त्रालयले टिपोट गरेका कतिपय बुँदाहरु अमिल्दो छन भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर हामी राज्यविरुद्ध जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको खण्डमा आउन सक्ने समस्यातर्फ पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर त्यसले दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यी सबै विकल्पका विषयमा गम्भिर छलफल गरेर संस्थालाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारण हो । सबैभन्दा उत्तम दुई पक्ष मिल्नू नै हो । उनीहरुबीचको सहमति नै विवाद समाधानका उत्तम विकल्प हो । तर सहमति तोडेर केहि ब्यक्तीलाई मन परेन भन्दै लाखौ नेपालीलाई भत्काउने त कुरा आउँदैन न नी ?
संस्थामा धेरै आर्थिक चलखेल भयो, पैसा धेरै खर्च भयो, गाह्रो भयो भनेर डेलिगेट्स सिस्टममा परिवर्तन ल्याइएको हो । त्यसैले डेलिगेट्स सिस्टमको विषयमा तुरुन्तै सहमति हुनु पर्ने थियो तर अग्रजहरु लाग्दा पनि त्यो सम्भावना देखिएन । त्यसकारण एनआरएनए खुस्कीयो भने हामी पनि खुस्कन्छौ र संस्स्था नै नरहे कोहि पनि रहँदैनौ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।
अब संस्थालाई निकास दिन नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।.मैले संरक्षकको हैसियतले भन्नुपर्दा आपत्तकालीन अवस्थामा मात्र संरक्षक परिषद्ले काम गर्ने हो भन्ने लाग्छ । तर वर्तमान कार्यसमितिले कोरोना महामारीमा यति धेरै काम गरेको छ । राम्रा काम तथा सुधारहरु गरेको छ । त्यसैले अहिले नै सानो सानो विवादमा संरक्षक परिषद्ले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन ।
सन् २००३ देखि निरन्तर रुपमा विभिन्न भूमीकामा रहँदै आउनु भएको थापा गैर आवासीय नेपाली संघको संरक्षक हुनुहुन्छ । विगत लामो समयदेखि एनआरएन नागरिकता निरन्तरता कार्यदल संयोजक रहँदै आउनु भएको थापा एनआरएनएको संस्थापकमध्येको एक मानीनुहुन्छ ।
प्रकाशित | ६ कार्तिक २०७८, शनिबार २०:१३
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विचाराधीन १३ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय
भारतीय नागरिकको कर छलीका लागि नेपालीको नाममा सम्पत्ति, यसरी पत्ता लाग्यो कर छली
काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हरिबोल भण्डारी अत्याधिक मतका साथ विजयी, कसको कति मत ? (सूचीसहित)
सिन्धुपाल्चोकमा पहिलो पटक महिला सिडिओ : यसअघि ४६ जना पुरुष सिडिओ बनेका थिए